Gaudí's Casa Botines ga-emepe ọnụ ụzọ ya n'April maka oge mbụ | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, León
Ọrụ nke onye ọkaibe ọgbara ọhụụ bụ Antonio Gaudí nwere njikọ chiri anya na Barcelona. Maka nke a, mgbe anyị na-ekwu maka onye omenkà a, anyị ga-echeta ozugbo Park Güell, akara ngosi Sagrada Familia ma ọ bụ ụlọ ọgbara ọhụrụ. Agbanyeghị, Gaudí hapụrụ ọrụ atọ na mpụga Catalonia: Casa Botines, Capricho de Comillas na Episcopal Obí Astorga. Ọmarịcha mara mma ma ọ bụghị nke ọma mara.
Casa Botines ga-emeghe ọnụ ụzọ ya n'ihu ọha site na Eprel 23 mgbe arụ ọrụ mweghachi kpụ ọkụ n'ọnụ. Nraranye a ga - enye ohere ịnweta ụlọ ahụ dum, isi ụlọ ọrụ ugbu a nke Fundación España Duero, ihe na - emetụbeghị mbụ na akụkọ 125 afọ ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịpụ na León, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa n'onwe gị ihe ịtụnanya ụlọ a na stampụ nke Antonio Gaudí.
1 Akụkọ banyere Casa Botines
2 Mkpa nkọwa
3 Meghere ọha na eze
4 Ọchịchọ nke Casa Botines
4.1 Ọdụm akara
4.2 Ihe akpụrụ akpụ nke saint george
4.3 Ihe akpụrụ akpụ nke Antonio Gaudí
Akụkọ banyere Casa Botines
Onye ama ama ama ama ama na Catalan na-agụcha Episcopal House of Astorga mgbe Eusebi Güell, onye na-elekọta ya na enyi ya, gwara ndị ọchụnta ego Leon textile abụọ na ha na-achọ onye ga-ewu isi ụlọ ọrụ ha, ụlọ obibi na ụlọ nkwakọba ihe, n'etiti Odum.
Gaudí rụrụ otu obí eze nke sitere na mgbe ochie nke ọ gbakwunyere ọtụtụ atụmatụ nke ụdị Neo-Gothic. Blọ Botines nwere ala anọ, okpuru ulo na ụlọ elu. O tinyere ulo nke ndi nwe ha na ala nke mbu ma ndi ozo ga-aga ego ugwo. Ọ debekwara ala ala maka ọfịs na okpuru ulo a ga-eji dị ka ebe nchekwa ahịa na ngwa ahịa maka ụlọ ọrụ akwa ya.
Gaudí chọrọ ịhapụ akara nke aka ya site na ịtinye na ụlọ elu anọ nke cylindrical elu nke ejiri mkpịsị aka ha kpụrụ akpụ, ihe akpụrụ nke Saint George na dragon ahụ, na nnukwu mmiri nke ogige a rụrụ arụ chebere.
Ọrụ ndị ahụ malitere na 1892 mgbe ha merisịrị ọtụtụ esemokwu na kansụl obodo León na Casa Botines gwụchara ihe na-erughị otu afọ na-eju onye ọ bụla anya. Ọsọ ọsọ e wuchara ụlọ a ga-eweta esemokwu ka asịrị na-agbasa na arụghị ya nke ọma na ọ ga-emecha daa.
Ihe nzuzu a kpasuru Gaudí iwe n'ihi na ọ bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ nke mbụ na aha ya nwere ike mebie. Eziokwu bụ na maka owuwu nke Botines House ọ jiri usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ dịka ntọala siri ike. O mekwara ka obí eze ahụ kwekọọ na ihu igwe oyi nke Leon ma jiri mgbidi nzu dị ma mekwaa ka ime ụlọ ya dị elu site na nnukwu windo neo-Gothic na mbara igwe.
Iji kwụsị asịrị ndị ahụ e kwuru na mbụ, Antonio Gaudí nyere akụkọ gbasara teknụzụ na ndị injinia ahụghị nsogbu nhazi. Ihe gosipụtara site n'ịnọgide na-eguzo ọtụtụ iri afọ ruo ugbu a.
Maka owuwu nke Casa Botines, Antonio Gaudí mụrụ ihe ncheta dị iche iche nke obodo ahụ iji jikọta ọrụ ya na ha. Katidral nke León nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke wụsara okwute limestone n'èzí, windo ndị nwere windo na mkpọmkpọ ụlọ n'elu ụlọ nke ụdị ndị Leonese ma nye ime ụlọ ahụ àgwà ndị Barcelona dị na ọrụ ya.
Meghere ọha na eze
Na 1931 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León nwetara ụlọ ahụ. E kwupụtara ya dị ka Ncheta Mere Ihe Akụkọ na 1969, na 1994 enwere mweghachi ọhụrụ. A na-ejikarị ala ụlọ ahụ eme ihe ngosi. Ugbu a ọ ga-emepe ala atọ nke ọ ga-egosipụta akụkụ nke mpempe 5.000 ọ nwere, gụnyere eserese nke Casas, Sorolla, Madrazo ma ọ bụ Tàpies. N'ọzọ ọzọ, ọ ga-eji aka ya megharịa ndị ọzọ site na ntụrụndụ nke ụlọ ahịa akwa na ụfọdụ ụlọ. Site na nke a, ha nwere olile anya inweta ego ga enyere ha aka inwe afọ ojuju. Na mgbakwunye, ọ ga-abụ ebe ọhụụ njem nleta ịga leta na León.
Ọchịchọ nke Casa Botines
N'ọnụ ụzọ nke mbụ facade, Gaudí dọbara ọdụm kpụrụ akpụ, ihe nnọchianya nke obodo ahụ, na n'elu ya ihe ọkpụkpụ nke Saint George na dragon ahụ dị ka ụtụ maka obodo ya Catalonia.
Ihe akpụrụ akpụ nke saint george
Na facade nke Casa Botines, anyị hụrụ ihe akpụrụ nke Saint George, onye nsọ dị nsọ nke Catalonia na Aragon. Enwekwara ihe akpụrụ akpụ ahụ na León, ebe ọ bụ na ọ kwụsịrị na ihe ngosi ọdịnala nke Saint George. A na-akpụzi ihe mmuo a na Saint George na Lorenzo Matamala Pinyol na dragon ahụ yiri nke ejirila na Sagrada Familia.
N'oge ọrụ mweghachi na 1950, ndị ọrụ chọtara tube dị n'ime ihe ọkpụkpụ ahụ, n'ime nke bụ atụmatụ mbụ nke ụlọ ahụ nke Gaudí bịanyere aka na ya, nkwekọrịta ụlọ, mkpụrụ ego, akwụkwọ mmezu nke ọrụ na akwụkwọ akụkọ nke oge ahụ.
Ihe akpụrụ akpụ nke Antonio Gaudí
N'ihu Casa de Botines ị nwere ike ịhụ ụlọ ahụ na-anọdụ n'akụkụ onye na-ese ya. Ọ bụ ihe ọkpụkpụ ọla kọpa nke José Luis Fernández mere, nke gosipụtara Gaudí ka ọ nọ ọdụ na-ede ihe ụfọdụ. N'oge nleta Casa Botines de León, ịnọdụ ala n'oche a na iji Gaudí were foto bụ ihe onye ọ bụla na-eme njem nleta kwesịrị ime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » León » Gaudí Casa Botines ga-emeghe ọnụ ụzọ ya na Eprel maka oge mbụ
Kacha ahụkarị Ista Grafica na Spain